ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို မနီလာမြို့ က ဖိလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ထိုးသတ်ချင်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #အောင်လန်အန်ဆန်း - SPORTS MYANMAR
ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို မနီလာမြို့ က ဖိလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ထိုးသတ်ချင်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #အောင်လန်အန်ဆန်း
By Edi Tor April 16, 2019
အောင်လန် အန်ဆန်း နဲ့ ဖီလစ်ပိုင် ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို အောက်တိုဘာလ 13 ရက် နေ့မှာ ၊ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ဖို့ စီစဉ် ထားခဲ့တာပါ။
အဲဒီပွဲကို အောင်လ အန်ဆန်း က ဟာဆီဂါဝါ ကို အနိုင်ယူတဲ့ ပွဲစဉ် အပြီး ၊ ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှောက်မှာ အတည်ပြု ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဗီရာဟာ အောင်လ အန်ဆန်းရဲ့ Light Heavyweight Champion ဆု ကို စိန်ခေါ် ခဲ့ရာ ကနေ ၊ အောင်လ က လက်ခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ကတော့ အောင်လ အန်ဆန်းဟာ သူ့ရဲ့ လေ့ကျင့်ဖော် မာတင်ငုယင် ရဲ့ ပွဲကို လိုက်ပါ အားပေးဖို့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ မနီလာ မြို့ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါတယ်။
သူဟာ မာတင် ငုယင် အတွက် ဖယ်သာဝိတ် ချန်ပီယံဆု ကာကွယ် နိုင်ဖို့ အတွက် ကူညီလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ၊ ငုယင် ကလဲ မွန်ဂိုလီယား ဖိုက်တာကို အနိုင်ယူ အပြီးမှာ အောင်လကို ရည်ညွှန်းပြီး အောင်ပွဲ ခံသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သတင်းသမားတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခိုက်မှာတော့ အောင်လန် အန်ဆန်း က ဗီရာ နဲ့ ပွဲကို ဖိလစ်ပိုင်က ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ထိုးသတ်ချင်တဲ့ အကြောင်းကို ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ဘရန်ဒွန် ဗီရာ နဲ့ ပွဲကို ဘာဖြစ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် မှာ မစီစဉ် ကြတာလဲ? ဒီပွဲဟာ အံ့အား သင့်စရာတွေ နဲ့ ပြည့်နှက် နေမှာ မဟုတ်လား?
ဘာဖြစ်လို့ ဂျပန်မှာ စီစဉ်နေမှာလဲ ၊ ဖိလစ်ပိုင်မှာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ။ ကျနော် ကတော့ ဖိလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ထိုးချင်တယ်ဗျာ….
ဖိလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေက တကယ့်ကို MMA ရဲ့ အမာခံ ပရိသတ်တွေပါ ။ ဒါကို ကျနော် ခံစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ရှေ့မှောက်မှာ ထိုးသတ်ချင်မိတာပါ” လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
ဗီရာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်ချက် စကားပြောဆို ရာမှာတော့ အောင်လ က ” ဗီရာက ကျနော်နဲ့ ထိုးချင်တဲ့ အကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားတာ တော်တော်လေး ကြာပါပြီ ဒါပေမယ့် ဂျပန် ရောက်မှပဲ တရားဝင် အတည်ပြု ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
ကျနော် အဲဒီ စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံမိခဲ့တာက ၊ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် က ဗီရာ ရဲ့ ဖန် ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။ သူ ဒီလောကထဲမှာ စတင် အခြေချခဲ့တဲ့ အချိန်က စလို့ ၊ ကျနော်က သူ့ကို အားပေးခဲ့တာဗျ။ အခုတော့ ကိုယ် အားပေးတဲ့ ဖိုက်တာ နဲ့ ပြန်ထိုး ရတော့မယ် ဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမိတာပေါ့။
သူဟာ ကျနော့် ဖိုက်တာ ဘ၀ အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဘက် ဖြစ်လာမလား ဆိုတာတော့ မပြောတတ်သေး ပါဘူး ၊ တကယ်တမ်း ထိုးသတ်ကြည့်တဲ့ အချိန်မှပဲ သိကြမှာပါ။
သေချာတာ သူဟာ ကျနော့်ထက် အရပ် ပိုရှည်တယ် ၊ ပိုပြီးတော့ ၀ိတ်ကြီးတယ် ၊ အား ပိုပြင်းတယ် ၊ နဗန်း သတ်တဲ့ နေရာမှာလဲ ထူးချွှန်တဲ့သူလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော့် ကို အများကြီး ခြိမ်းခြောက်လာမှာ သေချာပါတယ်။
ကျနော့် အတွက် တစ်ခုတည်းသော အားကိုး စရာကတော့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ နှလုံးသား ပေါ့။ သူဟာ ကျနော့်ကို အသာစီး နဲ့5ချီ စလုံး ထိုးချင် ထိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကလဲ ရသလောက် ပြန်တိုက် မှာပါ။
ကျနော့်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိတယ် ၊ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးချင်တဲ့ ခံယူချက်ရှိတယ် ၊ ပြီးတော့ အရမ်းကို အားကိုးရတယ် Hard Knocks 365 အဖွဲ့လဲ ရှိနေတယ်လေ။ ဒါတွေက ဗီရာ ရဲ့ တိုက်ကွက်တွေကို တုန့်ပြန်ဖို့ အားကိုးရာတွေ ချည်းပါပဲ” လို့ မှတ်ချက်ပေး ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတျမယျ့ ပှဲကို မနီလာမွို့ က ဖိလဈပိုငျ ပရိသတျတှေ ရှမှေ့ာ ထိုးသတျခငျြလို့ ပွောဆိုလိုကျတဲ့ #အောငျလနျအနျဆနျး
အောငျလနျ အနျဆနျး နဲ့ ဖီလဈပိုငျ ဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံ ဗီရာ တို့ ထိုးသတျမယျ့ ပှဲကို အောကျတိုဘာလ 13 ရကျ နမှေ့ာ ၊ ဂပြနျ နိုငျငံမှာ ထိုးသတျဖို့ စီစဉျ ထားခဲ့တာပါ။
အဲဒီပှဲကို အောငျလ အနျဆနျး က ဟာဆီဂါဝါ ကို အနိုငျယူတဲ့ ပှဲစဉျ အပွီး ၊ ပရိသတျတှေ ရှမှေ့ောကျမှာ အတညျပွု ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ၊ ဗီရာဟာ အောငျလ အနျဆနျးရဲ့ Light Heavyweight Champion ဆု ကို စိနျချေါ ခဲ့ရာ ကနေ ၊ အောငျလ က လကျခံခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနေ့ ကတော့ အောငျလ အနျဆနျးဟာ သူ့ရဲ့ လကေ့ငျြ့ဖျော မာတငျငုယငျ ရဲ့ ပှဲကို လိုကျပါ အားပေးဖို့ ဖိလဈပိုငျ နိုငျငံ မနီလာ မွို့ကို ရောကျရှိ လာခဲ့ ပါတယျ။
သူဟာ မာတငျ ငုယငျ အတှကျ ဖယျသာဝိတျ ခနျြပီယံဆု ကာကှယျ နိုငျဖို့ အတှကျ ကူညီလကေ့ငျြ့ပေးခဲ့သူ ဖွဈပွီး ၊ ငုယငျ ကလဲ မှနျဂိုလီယား ဖိုကျတာကို အနိုငျယူ အပွီးမှာ အောငျလကို ရညျညှနျးပွီး အောငျပှဲ ခံသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနောကျ သတငျးသမားတှေ နဲ့ တှဆေုံ့ခိုကျမှာတော့ အောငျလနျ အနျဆနျး က ဗီရာ နဲ့ ပှဲကို ဖိလဈပိုငျက ပရိသတျတှေ ရဲ့ ရှမှေ့ောကျမှာ ထိုးသတျခငျြတဲ့ အကွောငျးကို ထုတျဖျော ပွောဆို သှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
” ဘရနျဒှနျ ဗီရာ နဲ့ ပှဲကို ဘာဖွဈလို့ ဖိလဈပိုငျ မှာ မစီစဉျ ကွတာလဲ? ဒီပှဲဟာ အံ့အား သငျ့စရာတှေ နဲ့ ပွညျ့နှကျ နမှော မဟုတျလား?
ဘာဖွဈလို့ ဂပြနျမှာ စီစဉျနမှောလဲ ၊ ဖိလဈပိုငျမှာရော မဖွဈနိုငျဘူးလား ။ ကနြျော ကတော့ ဖိလဈပိုငျ ပရိသတျတှေ ရှမှေ့ာ ထိုးခငျြတယျဗြာ….
ဖိလဈပိုငျ ပရိသတျတှကေ တကယျ့ကို MMA ရဲ့ အမာခံ ပရိသတျတှပေါ ။ ဒါကို ကနြျော ခံစားမိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ ရှမှေ့ောကျမှာ ထိုးသတျခငျြမိတာပါ” လို့ ထုတျဖျော ပွောဆိုသှားခဲ့ ပါတယျ။
ဗီရာ နဲ့ ပတျသကျလို့ မှတျခကျြ စကားပွောဆို ရာမှာတော့ အောငျလ က ” ဗီရာက ကနြျောနဲ့ ထိုးခငျြတဲ့ အကွောငျး ကမျးလှမျးထားတာ တျောတျောလေး ကွာပါပွီ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျ ရောကျမှပဲ တရားဝငျ အတညျပွု ဖွဈသှားခဲ့တာပါ။
ကနြျော အဲဒီ စိနျချေါမှုကို လကျခံမိခဲ့တာက ၊ ကိုယျ ကိုယျတိုငျ က ဗီရာ ရဲ့ ဖနျ ဖွဈနလေို့ ပါပဲ။ သူ ဒီလောကထဲမှာ စတငျ အခွခေခြဲ့တဲ့ အခြိနျက စလို့ ၊ ကနြျောက သူ့ကို အားပေးခဲ့တာဗြ။ အခုတော့ ကိုယျ အားပေးတဲ့ ဖိုကျတာ နဲ့ ပွနျထိုး ရတော့မယျ ဆိုတော့ စိတျလှုပျရှားမိတာပေါ့။
သူဟာ ကနြေျာ့ ဖိုကျတာ ဘဝ အခကျခဲဆုံး ပွိုငျဘကျ ဖွဈလာမလား ဆိုတာတော့ မပွောတတျသေး ပါဘူး ၊ တကယျတမျး ထိုးသတျကွညျ့တဲ့ အခြိနျမှပဲ သိကွမှာပါ။
သခြောတာ သူဟာ ကနြေျာ့ထကျ အရပျ ပိုရှညျတယျ ၊ ပိုပွီးတော့ ၀ိတျကွီးတယျ ၊ အား ပိုပွငျးတယျ ၊ နဗနျး သတျတဲ့ နရောမှာလဲ ထူးခြှနျတဲ့သူလေ။ ဒါကွောငျ့ ကနြေျာ့ ကို အမြားကွီး ခွိမျးခွောကျလာမှာ သခြောပါတယျ။
ကနြေျာ့ အတှကျ တဈခုတညျးသော အားကိုး စရာကတော့ စိတျဓါတျ နဲ့ နှလုံးသား ပေါ့။ သူဟာ ကနြေျာ့ကို အသာစီး နဲ့5ခြီ စလုံး ထိုးခငျြ ထိုးနိုငျပါလိမျ့မယျ ၊ ဒါပမေယျ့ ကနြျောကလဲ ရသလောကျ ပွနျတိုကျ မှာပါ။
ကနြေျာ့မှာ ခိုငျမာတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ရှိတယျ ၊ ဘယျတော့မှ အရှုံးမပေးခငျြတဲ့ ခံယူခကျြရှိတယျ ၊ ပွီးတော့ အရမျးကို အားကိုးရတယျ Hard Knocks 365 အဖှဲ့လဲ ရှိနတေယျလေ။ ဒါတှကေ ဗီရာ ရဲ့ တိုကျကှကျတှကေို တုနျ့ပွနျဖို့ အားကိုးရာတှေ ခညျြးပါပဲ” လို့ မှတျခကျြပေး ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ။